Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း ) - Hello Sayarwon
Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း )
Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း ) ကဘာလဲ။
အူကျွံခြင်းဆိုသည်မှာ ဝမ်းဗိုက်ခေါင်းနံရံရှိ အပေါက်မှ အူ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တိုးထွက်ခြင်းသော အခြေအနေတစ်ခု ကိုခေါ်ပါသည်။ ထိုအပေါက်သည် ဝမ်းဗိုက်နံရံ၏ ပါးခြင်း အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အူမှ ဖိအားသည် ထိုအပေါက်ကို တိုးသောအခါ အမြှေးပါးသည် ပေါက်သွားပြီး အူသည် ထိုအပေါက်တွင်းသို့ ဖြတ်ဝင်သွားပါသည်။
အူကျွံခြင်းသည် မကုသဘဲထားပါက ပိုဆိုးလာခြင်း သက်သာသွားခြင်း မရှိပါ။ သို့သော် အသက်အန္တရာယ်ရှိ နိုင် သော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန် သည် အူကျွံခြင်း ပိုကြီးလာသောအခါ နာကျင်လာသော အခါ ခွဲစိတ်မှုပြုရန် တိုက်တွန်းကြပါသည်။ ထိုရောဂါသည် အစာအိမ် ဖေါင်းခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး ချောင်းဆိုးစဉ်၊ ခါးကုန်း စဉ်၊ လှုပ်ရှားမှုပြင်းပြင်းလုပ်စဉ်တွင် နာကျင်ခြင်း ဖြစ်စေပါ သည်။ အစာခြေစနစ်ကိုလည်း အနှောင့်အယှက် ပေးပါ သည်။
Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အူကျွံခြင်းသည် အဖြစ်များပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ထက်အမျိုးသားများတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။ မည်သည့် အသက်အရွယ်တွင် မဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ် ဖြစ်စေ သော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ရောဂါ ဖြစ်ပွား ခြင်းကို လျော့ချ နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တစ်ခါတစ်ရံတွင် အူကျွံခြင်းသည် ရောဂါလက္ခဏာ မပြ ဘဲဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ အူကျွံခြင်းသည် သေးငယ်ပါက အပြင် ဘက်မှ ကြည့်၍ မမြင်နိုင်ပါ။ နာကျင်မှုကိုလည်း မခံစားရနိုင် ပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင် ပေါင်ခြံတွင် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ပြည့်သလိုခံစားရခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နောက်သို့မှီခြင်း၊ လဲလျောင်းခြင်းစသော ဝမ်းဗိုက်ဖိအားကို လျော့ချခြင်းဖြင့် အူကျွံခြင်းကို ဝမ်းဗိုက်ခေါင်းအတွင်းသို့ ပြန်သွင်း၍ ရပါ သည်။
အူကျွံခြင်းသည် ဝမ်းဗိုက်နံရံတွင် ညပ်နေပါက ဆိုးကျိုး များဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ ကျွံနေသောအူအား သွေး ထောက်ပံ့မှု ပြတ်တောက်ပါလိမ့်မည်။ အူကျွံသော အပိုင်းမှ တစ်ရှူးများ သွေးလုံလောက်စွာ မရရှိသောကြောင့် သေဆုံး ပါသည်။ ထို့အပြင် သင့် အစာခြေစနစ်ကို ပိတ်ဆို့ခြင်း ဖြစ် စေပါသည်။ အူကျွံခြင်းသည် ပြန်မဝင်ပါက အရေးပေါ် အခြေအနေ ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင် ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်သော လက္ခဏာများရှိပါက သို့မဟုတ် အစာအိမ် ဖောင်းလာသည်ဟု သတိပြုမိပါက
ခါးကုန်းသောအခါ နာကျင်ပြီး အနားယူသောအခါ သက်သာ သွားသောအခါ
ကိုယ်အပူချိန် ၃၇.၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ကျော်ပါက
လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှု သည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း သည် သင်၏ အခြေ အနေ ကောင်းမွန်ရန် အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါ သည်။
Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အူကျွံခြင်းသည် ဝမ်းဗိုက်နံရံတွင် အားနည်းသော အကွက်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနံရံတွင် ဟာကွက် ဖြစ်လာစေသော အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် ကြောင့် စြဖပါသည်။ ကလေးငယ်များတွင်မူ ထိုနံရံကောင်းစွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းပေါ် မူတည်၍ အူကျွံခြင်းသည် ရုတ်တရက် သို့မဟုတ် ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အမျိုးသားဖြစ်ခြင်း။ အူကျွံခြင်းသည် မိန်းကလေး များထက် ယောင်္ကျားလေးများတွင် ပိုဖြစ်ပါသည်။ ယောင်္ကျားလေးများတွင် ဝှေးစေ့အိတ်သည် ဝမ်း ဗိုက်မှ တွဲကျနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မိသားစုမှတ်တမ်း။ မိဘ သို့မဟုတ် မောင်နှမ စသော နီးစပ်သောဆွေမျိုးထဲတွင် အူကျွံဖူးပါက သင့်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်ပါသည်။
အချို့ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ။ cystic fibrosis နှင့် ရက်ရှည် ဝမ်းလျှောခြင်း စသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေအချို့သည် ရက်ရှည် ချောင်းဆိုးခြင်း ကိုဖြစ်စေ၍ ဝမ်းဗိုက်နံရံတွင် ဖိအားများစေပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်း။ အတော်အသင့်မှ အလွန် ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်းသည် ဝမ်းဗိုက်တွင် အပို ဖိအားများ ဖြစ်စေပါသည်။
ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများကို အားပျော့စေ၍ ဝမ်းဗိုက် တွင်း ဖိအားကိုတက်စေပါသည်။
အချို့အလုပ်အကိုင်များ။ အချိန်အကြာကြီး မတ် တပ်ရပ်ရသော သို့မဟုတ် အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရသော လူများသည် အူကျွံခြင်းဖြစ်နိုင်ချေမြင့်ပါသည်။
Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ဆေးမှတ်တမ်းယူခြင်းနှင့် ထိုင်ထပြုလုပ် ခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း စသည်တို့ပြုလုပ်၍စစ်ဆေးခြင်း တို့ဖြင့် ရောဂါအဖြေရှာခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အူကျွံခြင်းကို အပြင် ဘက်မှ မြင်နိုင်ပါက ဆရာဝန်သည် ဖုဖေါင်းခြင်းကို ထိတွေ့ ခံစားပြီး ထိသောနေရာတွင် နာကျင်သလား မေးမြန်းပါမည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် အူကျွံခြင်းကို အတည်ပြုရန်နှင့် အခြား ဆိုးကျိုးများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ပုံရိပ်ဖော်သော စစ်ဆေးမှု များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးများသော ပုံရိပ်ဖော် စစ် ဆေးမှုများမှာ-
ဘေရီယမ် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။ ဓါတ်မှန်တွင် အူကို ပိုကောင်းစွာ မြင်နိုင်အောင် ဘေရီယမ်ပါသော အရည် သောက်ရပါသည်။
ပြွန်ထိုး၍ကြည့်ခြင်း။ အစာအိမ်တွင်းအား ကြည့်ရှု ရန် ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသော ပြွန်တစ်ခု ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Inguina Hernia (အူကျွံခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အူကျွံခြင်းသည် ဆိုးကျိုးများ မဖြစ်ခင်တွင် ဆရာဝန် သည် ပိုဆိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကို တိုက် တွန်းပါမည်။ ကလေးငယ်များတွင် အလွန်နာကျင်နိုင်သော ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလောက် အမြန် ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ရန် ထောက်ခံထားပါ သည်။
ခွဲစိတ်ခြင်းကို ထုံးတမ်းစဉ်လာနည်းလမ်း ( အရေပြား အားခွဲ၍) သို့မဟုတ် laparoscopic နည်းလမ်း အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Laparoscopic ခွဲစိတ်မှုတွင် ဆရာဝန် သည် အရေပြားပေါ်တွင် ဖြတ်ရာပါးပါး လုပ်ပါသည်။ ထို ဖြတ်ရာမှ ကင်မရာနှင့် အလင်းပါသော ပြွန်ကိုသွင်းကာ အူကျွံသည့်နေရာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါသည်။ ကိရိယာများ တပ်ထားသော အခြားပြွန်ဖြင့် ကျွံသော အူကိုဖမ်းယူကာ ဝမ်းဗိုက်ခေါင်းတွင်းသို့ ပြန်သွင်းပါသည်။ ဝမ်းဗိုက်နံရံမှ အပေါက်ကိုလည်း အပ်နှင့်ချုပ်ကာ ပိတ်လိုက်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် အူကျွံခြင်း ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း အနာသက်သာသော ဆေးများသောက်ပါ။
ဆရာဝန်ခွင့်ပြုပါက လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် လှေကား တက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါ။ သို့သော် အလွန် မလုပ် ပါနှင့်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်း မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။ အမျှင်ဓါတ် ကြွယ်ဝသော အစာများကို လုံလောက်စွာ စားပါ။ အရည် ၈ခွက် နေ့စဉ်သောက်ပါ။ မပြင်းထန်သော ဝမ်းပျော့ဆေး လိုအပ်နိုင်သည်။ (ဥပမာ- milk of magnesium)
ဆရာဝန်က လုပ်နိုင်သည်ဟုပြောမှသာ လိင် ဆက်ဆံခြင်း ပြုလုပ်ပါ။
လေးလံသောအရာများ မပါက ဂရုစိုက်ပါ။ ရက်ရှည် ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Hernias. http://kidshealth.org/teen/diseases_conditions/digestive/hernias.html. Accessed July 9, 2016.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, 2012. Print edition. Page 969.